कोभिड१९ को नियन्त्रणमा अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने उत्कृष्ट ५ महिलामा नेपालकी डा. रुना झा #Covid19 • Health News Nepal
कोरोना भाइरस (कोभिड१९)को नियन्त्रणमा अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने बिश्वकै उत्कृष्ट ५ महिलामा नेपालकी डा रुना झा पनि परेकी छिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको यूएन वुमेनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका अग्रस्थानमा रहेर काम गरिरहेको ५ महिलाको सूचीमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा . झालाई राखेको हो।
यूएन वुमेनले पाँच जनाको विषयमा लेखेको जानकारीमा प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झाको कथा पनि समावेश गरेको छ। युनएन वुमेनले ‘कोभिड रेसपोन्समा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने ५ महिला’ को सूचीमा नेपालकी डा. झाको नाम सहितको विवरण उल्लेख गरेको हो।
कोभिड१९ मा पाँच महिलाको कथामा नेपाली रुना झाले कोरोना सम्बन्धि उत्कृष्ट काम गरेको पाइएको छ। प्राविधिक कामसँगै आफ्ना स्टाफको यातायात र खानेकुराको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनलाई छ।
फेबुु्रअरी महिनाको मध्य तिर चीनको वुहानबाट नेपाल सरकारले १७५ जनाको उद्दार गरी ल्याएपछि उनी र उनका स्टाफको टोलीको व्यवस्ता बढेको छ। उनी आफ्ना सहयोगी टीमको सुरक्षा प्राथमिकतामा भएको बताउँछिन्।
चीनको वुहानबाट उद्दार गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएका १७५ जनाको नमुना रातभरी संकलन गरी भोली पल्ट सबैको रिपोर्ट तयार पारिएको डा रुना बताउँछिन्।
कोरोना संक्रमणको जोखिममा परिवारमा नपरोस् भनेर उनी अलग्गै बस्छिन्। उनी भन्छिन्,‘ म मेरी छोरीलाई भेटेर अगाँल्न चाहन्छु। बुवाआमाको हेरचाह गर्न चाहन्छु तर उहाँ र अरुलाई सुरक्षित राख्न मैले मेरा इच्छासँग सम्झौता गर्नैपर्छ।’
डा . रुना झा बाहेक विश्वका यी चार महिलाले पनि कोभिड१९ को फ्रन्टलाइनमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्।